Son Heung-Min oo soo bandhigay qaabka cusub oo uu timaha u sameystay muddada uu marayo tababarka Milatari – Gool FM
Son Heung-Min oo soo bandhigay qaabka cusub oo uu timaha u sameystay muddada uu marayo tababarka Milatari
Haaruun April 26, 2020
(Seoul) 26 Abril 2020. Ciyaaryahanka kooxda Tottenham ee Son Heung-Min ayaa soo bandhigay qaabka cusub ee uu timaha u hagaajistay muddada saddexda isbuuc ah ee uu marayo tababarka milatari ee dalkiisa South Korea.
Son Heung-Min ayaa ku guda jira howlihiisa qaran ee saddexda isbuuc ee waajibaadka qarankiisa South Korea, waxaana uu ku biiray ciidamada qaranka, isagoo hadda timaha u hagaajistay si aan horay looga baran, dhowaan ayaana sawirrada jarmadiisa cusub la soo bandhigay.
Son wuxuu la shaqeeyaa ciidamada badda isagoo tababar kula qaadanaya Jariisadda Jeju, halkaas oo uu ku mari doono tababar aasaasi ah.
27-sano jirka ayaa dhammeystiray karantiil labo isbuuc kaddib markii uu ku soo laabtay South Korea, sharciga dalkaas ayaana dhigaya in ka hor inta uusan ninku gaarin da’da 28 inay qasab tahay inuu dhameystirto tababar milatari oo 21 bilood ah ilaa iyo in laga cafiyo mooyee.
Son ayaana cafis helay kaddib markii uu biladda dahabka u qaaday waddankiisa ciyaarihii Asian Games ee sannadkii 2018, laakiin waxa uu doortay inuu sameeyo tababarka waqtiga gaaban ee saddexda isbuuc.
Son iyo Spurs waxay isticmaaleen fursaddooda, iyadoo Premier League ay ka maqan yihiin sababo la xiriira Coronavirus, taasoo la micno ah in weeraryahanka uu adeeggiisa ka saari karo jidka ka hor inta uusan kubada cagta dib u bilaabin.
Waxaa la filayaa inuu ku laabto Magaalada London bartamaha bisha May, waxaana inuu diyaar u yahay inuu markale ciyaaro marka ciyaaraha dib loogu soo laabto.
Sawirku waxa uu u muuqday in xaaladdiisu ay wanaagsan tahay, marka laga soo tago inuu timaha u hagaajistay si ka duwan sidii hore.
David Alaba oo iska diiday u dhaqaaqista Manchester City & Labada Kooxood oo uu kala dooranayo oo la ogaaday
Kylian Mbappe oo muuqaal laga soo bandhigay isagoo baranaya luqadda Spanish-ka… (Real Madrid oo mideynaysa Mbappe & Haaland?)